Iyaqhubeka nokucanasa iCoronavirus kubadlali bePremiership - Impempe
Iyaqhubeka nokucanasa iCoronavirus kubadlali bePremiership
December 21, 2020 Impempe.com
ICoronavirus ilokhu iqhubeka nokukhombisa abantu ukuthi kubusa yona, futhi kumele bayihloniphe.
Miningi kakhulu imidlalo esimisiwe ngenxa yaleli gciwane, futhi kubukeka sengathi lesi simo sisazoqhubeka isikhathi eside. Muva nje kusanda kumiswa imidlalo yekhilkithi yeCSA Domestic Series ngenxa yayo iCorona.
Ngomsombuluko kuvele ukuthi abadlali abane beMaritzburg United bahlaselwe yileli gciwane. Lokhu kuchaza ukuthi laba badlali ngeke bawujabulele uKhisimuzi ngoba bazobe behleli ngabodwana endaweni efihlekile.
Ukutholakala kwalaba badlali beneCorona kuqinisekiswe usihlalo weqembu uFarook Kadodia kwiWitness. Uthe laba badlali kudingeke ukuthi bangawudlali umdlali weTeam of Choice lapho ibibhekene neStellenbosch FC. Lo mdlalo weDStv Premiership uphele ngo 2-2.
“Sihlole abadlali, okuyinto esiyenzayo njengoba kunegciwane. Imiphumela ikhombise ukuthi abadlali bethu abane banalo igciwane,” kusho uKadodia.
“Bahlezi ngabodwana kodwa sibheke ukuthi babuyele ekuziqeqesheni neqembu lonke ngeSonto.”
Abanye abadlali beqembu bavunyelwe ukuyoba nemindeni yabo njengoba kunguKhisimuzi. Nokho uKadodia ubacelile ukuthi baziphathe kahle, balandele imithetho yeCovid 19.
“Sinike abadlali umbandela oqondile ukuthi bazibheke kanjani ngesikhathi sekhefu. Ngeke sibavimbe abadlali ukuthi bangayi emindenini yabo ngoKhisimuzi. Sibatshelile abadlali ukuthi baziphathe kanjani futhi sithemba ukuthi bazokuhlonipha lokho,” kusho uKadodia.
ITeam of Choice izobuyela ekuziqeqesheni ngoMgqibelo ukuze ilungiselele umdlalo wayo neBloemfontein Celtic, eHarry Gwala Stadium, ngoJanuwari 2. Leli qembu laseMgungundlovu liyivale emsileni kwi-log yeDStv Premiership. Lisanda kuxosha umqeqeshi u-Eric Tinkler indawo yakhe ethathwe ngu-Ernst Middendorp obecija iKaizer Chiefs ngesizini edlule.
Previous Previous post: USukazi ucacisa ngokuhlukana nobeqeqesha iqembu uMalesela eligcwale umoya kuyena
Next Next post: UMphahlele ujatshuliswa ukungaphumuli kweChiefs ngamaholide